ဖွဘုတ်ရဲ့ Delight Text အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hahaha ??? – AsiaApps
April 26, 2018 April 26, 2018 fairyApp NewsNo Comment on ဖွဘုတ်ရဲ့ Delight Text အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hahaha ???
ဘော်ဒါတွေရဲ့ facebook post တွေမှာ haha react ပဲပေးတတ်ကြတဲ့ haha fan တွေအတွက် သတင်းကောင်းကြီးရောက်လို့လာပါပြီနော်…..
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပုံတွေ ပို့စ်တွေဆို haha လေးကတော့ ပေးလိုက်ရမှဆိုတဲ့ သူတွေရှိတ်လိုက်ပါဗျား။ အက်မင်ဆို နင့်ဖုန်းက haha reaction ကလွဲပြီးမရှိဘူးလားလို့တောင် ရွဲ့မေးခံရလောက်တဲ့ထိ haha အပေးကြမ်းသူပါ။ (တကယ်တော့ haha ပေးတယ်ဆိုတာ အရမ်းခင်လို့ဆိုတာ ဘော်ဒါတွေအချင်းချင်းပဲနားလည်တယ်နော့✌ ) အခုတခါမှာတော့ Facebook ပိုင်ရှင် ဇကာပေါက်ကြီးက ကိုယ်တွေလိုလူတွေအတွက် မိုင်ကုန် haha လို့ရအောင် အဆင်းဘီးတပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Hahaha လို့ပဲရိုက်ရိုက်၊ hahaha လို့ပဲရိုက်ရိုက် ကြိုက်သလို HAHAHA ပါ။ ကိုယ် HaHaHa လိုက်တဲ့စာသားလေးက ခရမ်းရောင်လေးပြောင်းသွားပြီး animation လေးနဲ့ ဟားနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့ရမှာပါ။ Wall post ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ဝင်တာမို့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဉီးနော်။ ?? (လုပ်ကြည့်လို့မရရင် facebook ကို update လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းအသစ်လဲတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြည့်ပါ အက်မင့်ကိုတော့ လာမဆဲရဘုနော်?)
ကဲ လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ Hahaha War ကြီးစလိုက်ရအောင် သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှပေးပါဉီးနော်….
Facebook ရဲ့ တခြား delight text တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်နော်✌ ။